Jereo ny Patio de los Leones tsara tarehy ao amin'ny Alhambra | Vaovao momba ny dia
Ny tokotanin'ny liona
Si handeha hitsidika an'i Granada izahayNy iray amin'ireo zavatra voalohany tokony ho hitantsika tsy misy isalasalana dia ny Alhambra. Ao anatin'izany dia misy toerana misongadina ambonin'ny olona hafa, toy ny Patio de los Leones malaza, izay ho fantatsika amin'ny antsipiriany. Ity tokotany mahafinaritra ity dia eken'ny rehetra, na dia tsy ny olona rehetra aza no mahalala ny tandindony na ny maha-zava-dehibe an'izany.
Ny fitsangatsanganana any Granada dia traikefa nahafinaritra, satria ity tanàna ity dia toerana iray manan-tantara manan-danja indrindra. Porofon'izany ny Alhambra tsy mampino, natsangana nandritra ny vanim-potoana Nasrid, rehefa niorina ny Fanjakan'ny Granada. Ao anatin'ity trano mimanda sy fonenana ity no Tokotanin'ny Liona tsara tarehy, izay an'ny faritra tsy miankina.
1 Tantaran'ny lapan'ny liona
2 Tandindon'ny tokotany
3 Loharanon'ny liona
4 Antsipiriany Patio
5 Inona no ho hita ao amin'ny Alhambra
6 Torohevitra momba ny dia mankany Granada
Tantaran'ny lapan'ny liona
Ity patio tsara tarehy ity dia nasain'i Mohammed V nandritra ny fe-potoam-piasany faharoa, rehefa naniry ny hanana ny lapan'ny liona izy io, izay misy io kianja misy loharano malaza io. Izany dia nitranga tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ao amin'io tokotanin-tsambo io dia namboarina ny fomban'ny Nasrid amin'izao fotoana izao, fotoana iray farany. Ny zavatra mahaliana indrindra momba an'io dia ny fanadihadiana natao tamin'ny loharano dia manondro fa ny liona izay manohana azy dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ka mialoha ny fananganana ny Alhambra aza izy ireo. Izany dia mitarika amin'ny finoana fa nafindra avy tany amin'ny toerana hafa izy ireo mba hanampiana azy ireo amin'ity tokotany ity, na dia tsy fantatra marina hoe avy aiza izy ireo.
Ity tokontany ity dia voalaza fa misolo tena amin'ny fomba paradisa islamika. Manana sanda ara-panoharana lehibe izy ireo ary ny singa lehibe indrindra dia ny rano, izay nanjary ny mahery fo. Izy io dia manana drafitra mahitsizoro, izay maneho ny cosmos. Afaka mahita famaky efatra mitarika mankany amin'ny loharano ianao ary mamakivaky ny patio iray manontolo, izay afaka maneho ireo teboka kardinaly na ireo renirano efatra an'ny paradisa. Niara-niangona teo afovoany izy rehetra, izay niakaran'ny loharano, izay tandindon'izao rehetra izao na ny Andriamanitra.
Ity loharano ity dia iray amin'ireo sombin-javatra manan-danja indrindra ary zava-dehibe amin'ny Alhambra. Nahasarika ny sain'ny mpahay tantara izany satria ny fanehoana tarehimarika momba ny biby dia tsy dia matetika loatra amin'ny zavakanto Silamo ary kely noho io habe io. Ankoatr'izay, amin'ny fahafantarana ny daty namoronana azy ireo, dia namorona fehintsoratra bebe kokoa momba ny tena niandohany aza izy ireo. Misongadina ihany koa ity loharano ity satria manana rafi-pitetezana sarotra izay mamela ny rano hitazona hatrany amin'ny sisiny tsy misy raraka.
Over the liona roa ambin'ny folo mitoetra amina kapoaka dodecagonal lehibe amin'ny marbra fotsy izay misy falany octagonal. Tononkalo nataon'i Ibn Zamrack no voasokitra amin'ny sisiny. Tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo dia nisy kapoaka hafa nampiana teo an-tampony, izay ao amin'ny Patio de los Adarves ankehitriny. Mikoriana avy ao am-bavan'ny liona ny rano, ary tsy tokony hohadinointsika fa izy no mpandray anjara fototra ao amin'ity tokotany ity.
Ity patio ity dia mitovy amin'ny hafa izay hita ao amin'ny Alhambra, toy ny Patio de Comares. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny tontolon'ny Silamo miaraka amin'ny drafitra nentim-paharazana an'ny trano Hispanika-Silamo mahazatra. Faritra tsy miankina io ary ny fiainana ara-tsosialin'ny fianakaviana no nanatanterahana izany. Famaritana an-kalamanjana iray voahodidin'ny efitrano, izay ampitaina amin'ity faritra ity izay ao anatiny fa manatrika ny ivelany. Ao ambadiky ny tsanganana misy haingon-trano Arabo be dia be misy galeraly voasarona izay mamela anao hialokaloka sy hankafy ny patio tsara tarehy nefa tsy mivoaka any ivelany, zavatra iray izay mitovy amin'ny fofon'ny Kristianisma.
Inona no ho hita ao amin'ny Alhambra
Ny Alhambra no tena manintona an'i Granada ary tokony hanokana andro iray ianao hahitanao azy milamina, satria manana toerana mahaliana maro izy io. Ny iray amin'izy ireo dia ny Generalife miaraka amin'ireo zaridaina, toeram-pialan-tsasatry ny fanjakan'ny silamo. Trano tsara tarehy izay ivelan'ny rindrin'ny Alhambra. ny Lapan'i Nasrid Izy ireo dia raisina ho iray amin'ireo faritra tsara indrindra amin'ny Alhambra. Ao anatin'ny efitrano dia afaka mahita asa tanana taloha ianao ary ambonin'izany rehetra izany dia mila mijery ny haingo arabo tsy mampino ianao.
Misy toerana mahavariana fotsiny, toy ny mampino Hall of the Abencerrajes. Ny valindrihana sy ny rindriny dia voasokitra tamin'ny antsipiriany an'arivony maro izay hamela ny olona ho moana. Mila manokana fotoana ianao hankafizanao ity vault mahatalanjona voaravaka amin'ny asan'ny mpanao asa-tanana ity.
Torohevitra momba ny dia mankany Granada
Ny iray amin'ireo zavatra tokony hatao mialoha hatrany dia mividy tapakila hitsidika ny Alhambra. Tsy ity no tonga voalohany ary tsy mahita tapakila satria indraindray dia amidy mandritra ny andro. Ka tokony vidiana izy ireo ary mialoha mba hialana amin'ny tahotra. Aza adino fa io no iray amin'ireo toerana be mpitsidika indrindra any Andalusia. Ankoatr'izay, tsara kokoa ny mandeha mandritra ny lohataona na amin'ny fararano, satria amin'ny ririnina dia afaka ny lanezy ary amin'ny fahavaratra dia sempotra ny hafanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny tokotanin'ny liona
Fiara tariby teide, inona no ho fantatra alohan'ny handehanany
Tapakilan'ny Tilikambo Eiffel